I-ZTE inokulahla ilayisensi ye-Android ngenxa ye-embargo eMelika | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ukuqala kakubi kwiveki ye-ZTE, emva kokubhengeza ukuvalwa kwayo eMelika. Isizathu soku kukuba uphawu kunyaka ophelileyo ludlule kwisohlwayo selizwe eIran kwaye bathengisa iifowuni kwilizwe laseAsia. Ukongeza, abakhange bazalisekise isithembiso sabo sokufaka iifayile kubasebenzi babo. Ekugqibeleni inkampani ijongene nale meko.
Oku kuthetha ukuba i-ZTE ayinakho ukusebenzisa naliphi na icandelo elivela e-United States.. Into enengxaki enkulu, kuba izinto zayo ezininzi zivela kwilizwe. Kungenxa yokuba basebenza kumashishini afana neQualcomm. Kodwa kwakhona, kucingelwa ukuba I-ZTE inokulahla ilayisensi yayo ye-Android.
Yile nto ithi imithombo eyahlukeneyo eMelika ibanga. Kuba uGoogle ngoku uthetha nomenzi wefowuni malunga nalo mbandela. Nangona ukuza kuthi ga ngoku akukabikho sigqibo sithathiweyo kwaye akwaziwa ukuba kuzakwenzeka ntoni. Kodwa isithintelo sinokubangela le meko.
Ukungabinakho ukusebenzisa izinto ezivela kwiimpawu ezinje ngeQualcomm kukuseta umva kweZTE. Kodwa yinto abanokuyibuyisela endaweni yokusebenzisa ezinye izinto ezivela eChina. Le yinto enokulungiswa kwaye akufuneki ichaphazele kakhulu. Kodwa ukwazisa iifowuni ngaphandle kwe-Android yingxaki enkulu kwinkampani.
Ngenxa yale meko, inkampani kufuneka yenza ifolokhwe yakho ye-Android kwaye uyisebenzise kwiifowuni zakho, ngaphandle kokuqinisekiswa nguGoogle Play. Ke ngekhe babe nokufikelela kwiVenkile yokuDlala okanye usetyenziso lukaGoogle. Ke baya kuba nemida emininzi kwizixhobo zabo. Nangona kunokwenzeka ukwenza oko e-China, apho kuqhelekile ukusebenzisa iinkonzo zomntu wesithathu kuba uGoogle Play akafumaneki.
Kodwa akukho kubila yingxaki enkulu kwi-ZTE. Kuba iifowuni ze-Android ngaphandle kweGoogle yeGoogle ayisiyonto ethengisa kakuhle okanye enomfanekiso olungileyo kwintengiso. Ke kuyakufuneka siphaphe kwaye sibone ukuba kwenzeka ntoni ekugqibeleni ngomenzi. Kuba ukuba baphulukene nelayisensi yabo, iya kuba yintlekele enkulu kubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » ZTE » I-ZTE inokushiywa ngaphandle kwe-Android ngenxa yesithintelo sase-US
Iiprojekthi zeGoogle AIY: Uhlelo lokusebenza lokumisela izixhobo zakho zobukrelekrele